Building Trust Through Digital Résumés | ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှတဆင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း - Bulletins - .LA
မြန်မာဖို့ဘာသာပြန်ထားသောကြောင့်ဆောင်းပါး၏အစိတ်အပိုင်းဖတ်ရှုဖို့ဒီမှာနှိပ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးသည် Google က Translate ကို အသုံးပြု. ဘာသာပြန်ထားသောသိရသည်။
#NextGenLeaders candidates, Joshua Chit Tun and Ramon Barajas, III, discuss how the communities of STUDENTdirect Publications and YoungINC.LA establish trust through their members' use of YoungINC.LA's digital résumés to connect their social media, to communicate, and to collaborate internationally on the television program, The Conner Bubble, hosted by Joe W. Conner, Ph.D.
Joshua Chit Tun isacandidate to represent California in the United States of America Senate in 2016. Ramon Barajas, III, isacandidate for United States of America Congress in 2016.
Follow #NextGenLeaders candidates
Facebook: Chit Tun for U.S Senate 2016
Twitter: J.C. 4US Senate 2016 (@VoteChitTun)
YoungINC.LA: Barajas, III, for U.S. Congress 2016
Facebook: Barajas, III, for U.S. Congress 2016
Twitter: R.B.3 4US Congress 2016 (@VoteBarajas)
#ခေါင်းဆောင်များ၏နယူးမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ (#NextGenLeaders) ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုယောရှုသည်ဦးချစ်ထွန်းနှင့် Ramon Barajas, တတိယ, ကျောင်းသားများတိုက်ရိုက်၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း(STUDENTdirect) စာစောင်များနှင့် YoungINC.LA ဒစ်ဂျစ်တယ် YoungINC.LA ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ '' အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ယုံကြည်မှုမြဲမြံစေသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေး , ချိတ်ဆက်ဖို့ဆကျသှယျဖို့, ပူးပေါင်းရန်နှင့်နိုင်ငံတကာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးမီဒီယာ, ဂျိုးဒဗလျူ Conner, ဒဿနိကဗေဒ၏ဆရာဝန်များကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံအဆိုပါပူဖောင်း Conner ။
ယောရှုကဦးချစ်ထွန်းက 2016 Ramon Barajas, တတိယအတွက်အမေရိကတိုက်ဆီးနိတ်၏ United States မှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုမယ့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါသည်, 2016 ခုနှစ်အမေရိကတိုက်ကွန်ဂရက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။
#NextGenLeaders ဖို့ (@NextGLeadersYLA) က Twitter ပေါ်တွင်သင်၏မေးခွန်းများကိုမေးပါ။
ပိုပြီး #မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များက ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုပါ
သငျသညျ #မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများလိုကျနိုငျ
Facebook က: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအထက်လွှတ်တော် 2016 ဘို့ချစ်ထွန်း
Twitter ကို: J.C. 4US အထက်လွှတ်တော် 2016 (@VoteChitTun)
Ramon Barajas, III ကို
YoungINC.LA: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကွန်ဂရက်လွှတ်တော် 2016 ဘို့ Barajas, III ကို,
Facebook ကအမေရိကန်ကွန်ဂရက်က 2016 ဘို့ Barajas, III ကို,
Twitter ကို: R.B.3 4US ကွန်ဂရက်စ 2016 (@VoteBarajas)
Chairman Joshua Chit Tun November 19, 2015 at 4:45am
Chairman Joshua Chit Tun November 21, 2015 at 7:41pm
Chairman Joshua Chit Tun November 23, 2015 at 11:22pm
The revised draft is solid.